မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်နဲ့ သတင်းထွက်ခဲ့ပြီး3နှစ် အကြာမှ ပထမဆုံးအကြိမ် မှတ်ချက်ပေးမှု ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ ဇီဒန်း - xyznews.co
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်နဲ့ သတင်းထွက်ခဲ့ပြီး3နှစ် အကြာမှ ပထမဆုံးအကြိမ် မှတ်ချက်ပေးမှု ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ ဇီဒန်း
ပြင်သစ် လက်ရွေးစင် အသင်းရဲ့ နည်းပြသစ် ဖြစ်လာဖို့ သတင်းကြီးနေခဲ့တဲ့ ရီးယဲ မက်ဒရစ် အသင်းရဲ့ ဂန္တဝင် ဇနက်ဒင်း ဇီဒန်း ကတော့ အင်္ဂလိပ် စကားကို ကျွမ်းကျင်စွာ မပြောတတ်တာက မန်ချက်စတာကို သွားရောက်ဖို့ အတွက်် အခက်အခဲ ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ ဝန်ခံလိုက်ပါတယ် ။
2018 တုန်းက ရီးယဲ မက်ဒရစ် အသင်းမှ နည်းပြ အဖြစ် ထွက်ခွာခဲ့တဲ့နောက် အသင်း လက်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဇနက်ဒင်း ဇီဒန်း ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းနဲ့ မကြာခန သတင်းထွက်ခဲ့ပြီး ဆိုးလ်ရှား ထွက်ခွာခဲ့တဲ့နောက်မှာလည််း သတင်းထပ်ထွက်ခဲ့ပါသေးတယ် ။
ဇနက်ဒင်း ဇီဒန်း ဆိုတာ ရီးယဲ မက်ဒရစ် အသင်းကို ကိုင်တွယ််ခဲ့စဥ်တုန်းက သုံးနှစ်ဆက်တိုက် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ဆွတ်ခူးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ အံ့ဖွယ် နည်းပြ ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်် ။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ နည်းပြ ဘဝမှာတော့ ရီးယဲ မက်ဒရစ် တစ်သင်းထဲကိုသာ ကိုင်တွယ်ခဲ့ဖူးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အခုတော့ အသက် နှစ် 50 ပြည့် မွေ့နေ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဇီဒန်းဟာ L’ Equipe နဲ့ အင်တာဗျူး လုပ်ခဲ့ရပြီး မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းအကြောင်း အမေးခံလိုက်ရချိန်မှာတော့ ‘ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဘယ်တော့မှ မပြောဘူး ‘ ၊ ဘာသာ စကား အခက်အခဲ အကြောင်းတွေကို ပြန်လည် ဖြေကြားသွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
” Never say never, ခင်ဗျား မော်ဒန် ဘောလုံး လောကမှာ နည်းပြ လုပ်နေရင် ဒီလိုပဲ ပြောမှာပါ ။ ကျွန်တော်ဟာ ကစားသမား ဘဝတုန်းက အသင်းတွေ အားလုံးကို ရွေးချယ််နိုင်ခွင့် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ နည်းပြ တစ်ဦး အဖြစ်နဲ့တော့ ကျွန်တော် သွားလို့ရတဲ့အသင်း 50 မပြည့်ပါဘူး ”
” ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတဲ့ အသင်း ဆိုတာလည်း နှစ်သင်း ၊ သုံးသင်းလောက်ပဲ ရှိပါတယ် ။ ကျွန်တော် အသင်း တစ်သင်းဆီ သွားမယ်ဆိုရင် ရည်မှန်းချက်က အောင်မြင်မှုတွေ ယူဖို့ပဲ ဖြစ်နေမှာပါ ။ ဒါကို ကျွန်တော် တွန့်ဆုတ်မှုမရှိပဲ ပြောရဲပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ကျွန်တော် သွားလို့ရနိုင်ခဲ့တဲ့ အသင်းတိုင်းဆီ မသွားခဲ့တာပေါ့ဗျာ ”
” အခြားသော အကြောင်းပြချက်တွေလည်း ရှိသေးတာပေါ့ဗျာ ။ ကျွန်တော် သွားချင်တဲ့ နေရာတိုင်း သွားလို့ မရနိုင်သေးပါဘူး ။ ဘယ်နေရာတွေ ဖြစ်မလဲ ? ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရရင် ဘာသာ စကားပေါ့ ။ အချို့သော အရာတွေက အလုပ်ကို ပိုပြီး ခက်ခဲသွားစေနိုင်တယ်လေ ”
” လူတွေက ကျွန်တော့်ကို ‘ မင်း မန်ချက်စတာကို သွားချင််သလား ? ‘ လို့ မေးတဲ့အခါမျိုးမှာ… ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ် စကားတော့ နားလည်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဆရာကျလောက်တဲ့ အထိတော့ မပြောဆိုတတ်သေးဘူးပေါ့ဗျာ ။ စကားမတတ်ပဲသွားတဲ့ နည်းပြတွေ ရှိတာ ကျွန်တော် သိပါတယ် ”
” ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်ပုံက ခြားနားပါတယ် ။ အောင်မြင်မှုတွေ ရနိုင်ဖို့ဆိုရင် လိုအပ်ချက် အများကြီး ဖြည့်စွက်ရပါ့မယ် ။ ဘောလုံးက နိုင်ငံတကာနဲ့ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်မျိုးလေ ။ ကျွန်တော် အောင်မြင်ဖို့ ဘာလိုအပ်လဲ ဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိပါတယ် ” လို့ ဇီဒန်း က ပြန်လည်် ဖြေကြားခဲ့လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Previous Article ဂန္တဝင် ကျောနံပါတ် ၁၄ ကို ရယူခြင်းကြောင့် ဖိအားတွေ ရှိနေတဲ့ အပေါ် တုန့်ပြန် ပြောကြားလိုက်တဲ့ အန်ကီတီးယား
Next Article တန်ဟတ် လက်အောက်မှာ ဘာတွေ လုပ်ပြနိုင်ဖို့ လိုအပ်မလဲဆိုတာ ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ ဒါးလော့